Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanamboaran-dàlana : Hanao kobaka am-bava i Jerry Hatrefindrazana
Fanamboaran-dàlana : Hanao kobaka am-bava i Jerry Hatrefindrazana
Tsy misy làlam-pirenena mendrika izany anarana izany intsony eto Madagasikara ankehitriny. Hatrany Toliara ka hatrany Diego ary mandalo an’i Fianarantsoa sy Antananarivo ary Mahajanga. Ny làlam-pirenena faha -7, faha-4 ary faha-6 ireo. Potika ary tena efa miharatsy tanteraka izy ireny. Zara raha misy ampahan-dàlana kely misy fanamboarana. Mbola amin’ny fomba ratsy atao hoe “TIP-TOP” ireny no ilazana azy. Ny lalampirenena faha-6 izay mampitohy an’Ambondromamy Diego dia efa omen’ny mpandeha sy ny mponina amin’ireny toerana ireny hoe “ n°-13”, izay midika hoe Andry Nirina Rajoelina rehefa natao ny fanadihadiana ny amin’io anarana io. Lavaka hatrany an-tehezan’ny fiara be mpitondra entana ireny no eo ampovoan’ny làlana. Voalaza ny mponina tany an-toerana fa fampanatenana nataon’ny filohan’ny repoblika tamin’ny propagandy io ka miandry izany izahay. Avy any Fianarantsoa tonga eto Antananarivo dia nataon’ny fiara tsotra tao anatin’ny adiny 8 ora teo aloha, nefa dia atao ao anatin’ny 12 ora izany raha fiara 4×4 tsy mataho-dàlana izany amin’izao fotoana izao.
Ny làlana mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina dia tsy tenenina intsony ny faharatsian’ny làlana. Làlana natao tao anatin’ny adiny enina teo aloha lasa iray andro ankehitriny. Ny làlam-pirenena rehetra manerana an’i Madagasikara dia potika tsy misy ho raisina intsony na iray aza. Tsy misy làlana tara intsony fa lasa tany avokoa no mampitohy ny distrika sy ny renivohitrin’ny faritra.
Inona izany no hataon’ny minisitra Jerry Hatrefindrazana izay minisitrin’ny asa vaventy voatendry amin’izao fotoana izao. Inona no ho vitany eo nefa na ny vola ho entina hanaovana ny làlana aza dia tsy mbola misy azo avy any ivelany mihitsy hanamboarana ireo làlam-pirenena ireo. Ny fitaovana vaventy izay nomena ny faritra ka ho tantanin’ny governora dia mikantso izao. Milaza ny governora ireo fa tsy misy vola ho entina hampihodinana ireo fitaovana ireo.
Ireo rehetra ireo no ilazana avy ahtrany fa tsy hahavita na inona na inona ity minisitra ity ao anatin’ny iray taona satria tsy hisy vola ho tantaniny sy hanam-boaran-dàlana ao.
Laharam-pahamehana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fanaovan-dàlana. Tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy tsara ny làlana. Izany no atao hoe kobaka am-bava sy fahavendranana koa satria nanaiky handray ministera poakaty.